DAAWO SAWIRRADA+AKHRISO: Taariikh nololeedkii Abuu Mansuur Al-amriiki oo ay shalay Alshabaab dileen. | Salaan Media
DAAWO SAWIRRADA+AKHRISO: Taariikh nololeedkii Abuu Mansuur Al-amriiki oo ay shalay Alshabaab dileen.
September 14, 2013 | Published by: Hamse
Cumar Shafik Xamaami oo loogu yeedho Abuu Mansuur Al-Amriiki ayaa Soomaaliya yimid sanadkii 2006-dii, xilligii gobolada Koofurta iyo badhtamaha ay ka talinayeen Midowgii Maxkamadaha islaamiga oo Ciidamadii Itoobiya ee taageerayay dowladdii C/llaahi Yuusuf ay dagaal uga saareen Goboladii ay maamulayeen.
Al-Amriiki ayaa ku dhashay sanadkii 1984-tii magaalada Daphne Gobolka Alabama ee dalka Mareykanka, waxaa iska dhalay Aabe Suuriyaan ah iyo Haweeney Mareykan heysatay diinta Kirishtanka, waxaa uu ku bar baaray magaalada Dimishiq ee dalka Suuriya.
Cumar Xamaami ayaa dib ugu soo laabtay Gobolka Alabama ee dalka Mareykanka, isagoo dhigayay School, waxaa uu noqday hormuudka Ardayda Muslimiinta ee wax ka dhiganayay Iskuulka.
Sanadkii 2002 ayuu u safray dalka Canada, kadib markii ay aabihii isku khilaafeen fikradihiisa xagjirnimada, waxaa uu halkaas ka bilaabay shaqo, isagoo caano geyn jiray xaafad ay Soomaalida ku badan yihiin, isagoo guursaday gabar Soomaali aheyd oo sanadkii 2005-tii u dhashay gabadhiisa Curadka ah.
Abuu Mansuur Al-Amriiki ayaa sanadkii 2005-tii aaday magaalada Qaahira ee dalka Masar, isaga, xaaskiisa iyo gabadha uu dhalay, waxaana bishii November ee sanadkii 2006-dii uu yimid Soomaaliya, xilligaasoo Maxkamadihii Islaamiga ka talinayeen.
Waxaa uu noqday Hogaamiye sare oo ka tirsan Shabaab, isagoo hogaamin jiray dagaalada, sanadkii 2007-dii ayay aheyd markii u horeysay oo fagaare lagu arko, isagoo tababar siinayay dagaalyahano Soomaali ah, waxaa uu ka soo muuqday Filimkii u horeeyay ee loogu magac daray Kamiin Bardaale oo ahaa howl gal dhaba gal ah oo Ciidamadii Itoobiyaanka jidka loogu galay, waxaana howl galkaas ku dhintay Nin Ajnabi u dhashay dalka Kenya oo lagu magacaabi jiray Musa Al-kenya.
Bishii May ee sanadkii 2011 ayuu mar kale ka soo muuqday fagaare ku yaal degmada Afgooye, halkaasoo uu kaga qeyb galay munaasabad tacsi aheyd oo loo dhigay geeridii Usaama Bin Laden Hogaamiyihii hore Al-qaacida oo 1-d- May ee sanadkaas lagu dilay dalka Pakistan.
Abuu Mansuur Al-Amriiki ayaa xilal kala duwan ka qabtay Shabaab, isagoo mar noqday Taliyaha Al-Shabaab, kuxigeenka Golaha Shuurada iyo xilal kale, waxaa uu dhowr jeer fariimo uu soo dhigay barta Youtube oo uu dhalinyarada reer galbeedka ku nool ugu baaqayay inay Soomaaliya yimaadaan oo ay Jihaadka ka qeyb galaan.
Waxaa uu caan ku ahaa Timaha oo aanu marnaba jirin, isagoo lahaa timo dhaa dheer oo gadaal ka xiri jiray, waana muuqaal inta badan lagu yaqaano raga Jihaadiga ah.
Al-Amriiki ayaa suugaan Rab ah soo qaadi jiray oo lagu soo jiidanayay dhalinyarada jihaad doonka, waxaa la sheegaa inuu door ku lahaa labaatameeyo dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo Soomaaliya dib ugu soo laabtay, sanadkii 2008-dii, oo ka bar bar dagaalamay Al-Shabaab.
Waxaa la sheegaa in Haween Soomaaliyed ku guursaday Soomaaliya, kuwaasoo caruur ay u dhaleen, lama oga caruurtiisa, waxaase uu horay ugu sheegay boq taariikhdiisa nololeed uga hadlayay inuu jecel yahay inuu la noolaado aabihii iyo walaashiis, balse taas aanay dhici karin.
Bishii March ee sanadkan ayay aheyd markii Mareykanka madaxiisa dul dhigay lacag gaareysa shan milyan oo doolar, cidii keenta xog ku saabsan halka uu joogo.
Tan iyo markii ay isku dhaceen isaga iyo Hogaamiyaha Shabaab Axmed Cabdi Godane waxaa uu ka bad baaday isku day dil, waxaana uu xulafo la ahaa garab ka soo horjeeday Hogaamiyaha Shabaab oo kala ahaa Xasan Dahir, Ibraahim Afghan, Macalin Burhaan iyo rag kale oo Soomaali iyo Ajaaniib isugu jiray.
Al-Shabaab horay u dilay Ibraahim Afhgan iyo Macalin Burhaan, oo ahaa garabkii ka soo horjeeday Axmed Godane, qaar kalena xir xiray, halka ay baxsadeen rag kale oo uu ku jiro Xasan Dahir Aweys oo iminka dowladda Soomaaliya u xiran.
Waxaa uu dhowr jeer fariimo u diray Al-Qaacida oo uu kaga codsanayay inay soo dhex galaan isaga iyo Abuu Zubeyr oo uu ku eedeynayay inuu ka leexday wadadii saxda ahaa, kuna takri falayo lacagaha canshuurta.
Wareysigiisa ugu dambeeyay ee todobaad ka hor uu siiyay Laanta afka soomaaliga ee VOA ayuu ku sheegay inuu ka baxay Al-Shabaab iyo Al-Qaacida, isla markaana yahay nin Argagixiso ah oo ka tirsan Beesha Raxanweyn.
Abuu Mansuur Al-Amriiki ayaa ah ninka labaad oo Mareykan ah ka tirsan Islaamiyiinta, ninka koowaad ayaa ah Afhayeenkii hore Usaama Bin Laden oo lagu magacaabo Cazaam, kaasoo ku dhuumaaleysanaya dalka Afganistan.
Ugu dambeyn Abuu Mansuur Al-Amriiki, nin kale oo dhalasho Britain heysta oo asalkiisa yahay Pakistani oo lagu magacaabi jiray Usaama Al-Biritaani, iyo ruux kale Soomaali magaciisa ahaa Carafaat ayaa saakay aroortii hore lagu dilay deegaan ka tirsan Gobolka Baay, oo lagu magacaabo Shangalow, balse u dhow Gobolka Gedo, gaar ahaan Baardheere.